Raha efa namaky ity bilaogy ity ianao nandritra ny fotoana elaela, dia fantatrao fa mankahala fitsipika aho. Mbola tanora dia tanora tokoa ny media sosialy ka toa mbola tsy tonga aloha ny fampiharana lalàna amin'izao fotoana izao. Ireo olona ao amin'ny FastCompany dia manangona amboaran-torohevitra vitsivitsy ary miantso azy ireo hoe Fitsipika momba ny haino aman-jery sosialy.
Ity infographic ity dia fitambaran'ny fitsipika navoaka tao amin'ny fanontana tamin'ny septambra an'ny magazine. Mbola tsy nantsoiko ireo fitsipika ireo satria nanitsakitsaka ny sasany tamin'izy ireo aho ary mbola nahazo valiny… saingy tena hatoro anao kosa ho toy ny fanangonana torohevitra tsara hanatsarana ny ezaka ara-barotra sosialy nataonao.